काठमाडौ : मानव जीवनको सबैभन्दा ठूलो धर्म नै मानव सेवा हो । कुनै मानिसको सानो सहयोगले कसैको जीवन बाँच्छ । एक पटक सोच्नुहोस् त सन्तान नै सृ’ष्टिको खेल कसैले चाहेर हुन्न ।जन्माएपछि हु’र्काउन कति लाग्छ ।
तर तपाईहरुको सानो सहयोगले ज’न्मिएर हुर्कि’एको लाई पुर्न जीवन दिए समान हुनेछ । आर्थिक सहयोग गर्न प्राविधिक रुपमा सम्भवन हुनेले सहयोग गरिदिनुहोस् ।कसैले चाहेरपनि प्राविधिक रुपले सहयोग गर्नसक्नुहुन्छ । टाढा हुनुहुन्छ । विदेशमा मोबाईल एपहरु भएपनि पठाउन मिल्दैन ।
कसैसँग मोबाईल एपपनि हुन्न त्यस्ता व्यक्तिले यो सन्देश जति सक्दो सेयर गरिदिनुहोस् । म बाँच्न चाहान्छु ।मानिसको श’त्रु रो’ग समान अरु को हुन सक्छ र ? रो’गले सानू ठुलो बुढो त’न्नेरी, धनी, गरिब कहाँ भन्छन् र ? भर्खरै २१ बर्षको कलिलो उमेरमा नै मेरो पा’ठेघरमा सं’क्रमण भएर पि’त्तथै’ली र मृगौ’ला सम्ममा अ’सर पार्दै गएको हुनाले बिगत १ वर्षदेखि बि’रामी छु ।
म स’न्दु वाइबा अहिले शिक्षण अस्प’ताल महाराजगञ्जमा उपचार गराइरहेकी छु । अहिले मसँग औ’षधि किन्ने पनि पैसा नभएकाले म सन्दु वाइवा लाई बचाऊनका लागि हजुरहरुको सहयोगको ठुलो खाँचो छ। म पुर्न जन्मको भी’ख माग्दछु । तपाई हरुको सानो सहयोगमा छ मेरो जीवन ।
विगत दुई साता देखी पा’ठेघ’र संक्रमण भई पि’त्तथैली र मृगौ’लामा समेत संक्रम’ण फै’लिएर टिचिङ्ग अस्पतालमा भर्ना भई उपचरत म मकवानपुर जिल्ला, इन्द्रसारोबार गाउँपालिका वडा नं. ५ निवासी सुरेंद्र वाईबाकी २१ वर्षीय पत्नि स’न्दु वाईबा हुँ ।
तपाईंको सानो सहयोगले बि’रामी म स’न्दुले नयाँ जीवन पाउन सक्छ साथै उनकी १८ महिनाकी छोरी र ६ बर्षे छोराको भ’विष्यको निम्ति भएनी सबैले आफ्नो तर्फबाट सक्दो मद्दत गरिदिनुहोला।
सबैले सक्दो सहयोग र यो पोस्ट लाई सेयर गरी उपचारका लागि आर्थिक सहयोग जुटाइ’दिनुहोला भनी विनम्र अ’नुरोध गर्दछु। म बाँ’चेर यी फूलका कोपिला जस्ता बच्चालाई फूलाउन चाहान्छु, सम्भव हुनेले सहयोग नहुँदा एक सेयर गरिदिनुस् है ।
२०७८ जेष्ठ ९, आईतवार १७:४७ गते 1 Minute 1042 Views